China 65w gallium nitride adapter 12 mu 1 Type-C dock(2 in 1) vagadziri nevatengesi |Wellink
65w gallium nitride adapta 12 mu1 Type-C dock(2 mu1)
Muenzaniso: OS- KZ001
Multi-function interface, inokodzera mhando dzakasiyana dzemidziyo: mhando-C/F PD60w, USB3.0 5Gbps, HDMI 4K HD, Gigabit Ethernet port 1000Mbps, VGA1080P, TF/SD kadhi slot 3.0, Audio ine Mic 3.5mm, Type- C PD 18w.
HDMI, USB 3.0*3, gigabit network port, PD chargingport*2, SD/TF kadhi slot, 3.5mm odhiyo, Type-C 3.1, VGA
AC simba tambo
(CN,US GB, AU) kureba 1.5M
Type-C fambisa data line ne
1. tsigira 10 data kutapurirana
2. tsigira 4K 40Hz kutapurirana kwevhidhiyo, E-Marker chip
3. tsigira PD 100w yakakwira ikozvino kuchaja
sirivha, tsvuku, nzvimbo grey, rima bhuruu, rima rakasvibira
• Dhizaini yeMacBook: MOKiN USB C HUB yakagadzirirwa MacBook Pro 2020/ 2019/ 2018/ 2017/ 2016, 13&15.4&16", Macbook Air 2020/2019/2018. HUB ine mbiri 4K 60Hz VGA 60Hz 60Hz 60Hz HDMI port port, 87W power delivery, 1000Mbps Ethernet port, 2 x USB 3.0 port, 2 x USB 2.0 port, SD/TF card reader 3.5 mm mic/audio.Attention: Iyi hub haigoni kuwedzera skrini yeMacBook ine M1 chip.
• Inotsigira zviratidziro zvitatu zvemasikirini: iyo MOKIiN USB C docking station, iyo inotsigira kuratidzwa panguva imwe chete pamatatu matatu, inogona kuwedzera kushanda kwako kwekushanda katatu.Dual HDMI ports inotsigira zvigadziriso zvekusvika ku4K 60Hz.Chiteshi cheVGA chinotsigira sarudzo kusvika ku1080p 60Hz.Ndokumbira utarise: Kana iwe uchida kuona iyo yepamusoro modhi, unoda MacBook ine DP1.4, zvikasadaro iyo yekubuda skrini inogona kungosvika 4K@30Hz.
• Triple screen: unogona kushandisa maviri HDMI uye imwe VGA interface kuti uwedzere panguva imwe chete.Zvisinei, kana ukashandisa zviteshi zvitatu zvevhidhiyo panguva imwe chete, imwe yeHDMI neVGA ports inogona kungova mugirazi modhi, uye imwe HDMI port iri mukuwedzera mode.Kana iwe uchingoshandisa maviri HDMI ports panguva imwe chete, unogona kumhanyisa maitiro ekuwedzera.
• MoKiN docking station ine 1000 Mbps Ethernet port, unogona kudhawunirodha mafirimu nekukurumidza, kutamisa mafaera uye kuderedza latency mumitambo.Zviteshi zviviri zve USB 3.0 zvinotsigira mazinga ekufambisa data anosvika ku5Gbps.Kuverenga SD uye TF makadhi zvinongotora mashoma mashoma.Maviri USB 2.0 madoko anokodzera zvirinani mbeva, kiibhodhi kana zvimwe zvishandiso.
• Iyo SD kadhi uye micro SD kadhi inogona kushandiswa nekukurumidza kutamisa mwero unosvika 40 MB/s.Unogona kutamisa mafoto ako kana mavhidhiyo kubva kamera kuenda kune laptop mumasekondi.Iyo 87W USB yekuchaja chiteshi inokutendera kuti uchajise MacBook yako pamwe nemamwe anowirirana USB C PD malaptop uye masmartphone.Ndokumbira utarise: Shandisa neiyo yekutanga adapta yemudziyo wako.
• Adapter iyi irumbidzo huru kune yako itsva USB-C laptop.Neiyi adapta, unogona kufambisa / kuwedzera mavhidhiyo ane 2HDMI/VGA chiteshi kubva palaptop yako / cheki / purojekita / TV.Uye iwe unogona kushandisa 2 Supper Fast Speed ​​​​USB 3.0 ports (inomhanyisa kusvika 5 Gbps) kubatanidza hard drive yako itsva USB C Latops, uye 2 USB 2.0 Prot kubatanidza kiibhodhi yako, mbeva (pasina kunonoka) uye maviri anoshanda maSD uye TF kadhi muverengi wekufambisa vhidhiyo / mufananidzo (kusvika ku104 Mbps), Gigabit Ethernet LAN.-Chibatanidza cheimwe yakagadzikana Network state (inosvika 1000 Mbps) uye HD audio yekubatanidza (rutsigiro rweodhiyo / maikorofoni (CTIA standard)).
• Yakagadzirirwa MacBook Pro/MacBook Air, tsigiro yekuwedzera maitiro uye girazi modhi.
• Tapota cherechedza:
• Kana HDMI chete yakabatana, sikirini inogona kuratidza 4K@ 60Hz.Chete 15 inch uye 16 inch MacBook Pro inogona kusvika 4K @ 60 Hz, 13 inch MacBook Air inokwanisa kusvika pakakwirira resolution 4K @ 30 Hz.) Kana HDMI neVGA zvakabatana panguva imwe chete, skrini inoratidza 1080P@60Hz.
• Inoenderana ne15 inch/16 inch 13 inch MacBook Pro 2016/2017/2018/2019/2020 kana gare gare uye 13 inch MacBook Air 2018/2019/2020 kana gare gare
Mubvunzo:Iyo adapta yemagetsi inosanganisirwa here, kana kuti iwe unofanirwa kushandisa iyo macbook usb-c simba adapta kuti usimbise docking?
Mhinduro:Wadiwa mutengi,Ndatenda nechikumbiro chako.Yedu docking station iplug uye yekutamba uye inoda kufambiswa neMacBook yako.Kuti uwane ruzivo rwemushandisi zviri nani, tinokurudzira kuti ubatanidze PD kuchaja paunenge uchibatanidza chiteshi chekumira.
Mubvunzo:Ndingabatanidza mamonitor maviri kune yangu macbook air m1 neiyi?
Mhinduro:Kana iwe uine mbiri USB-C ports kune rimwe divi rako Mac - hongu unogona.Sezvauri kuona, plug kumakombuta ine mbiri USB- C ports.
Mubvunzo:Chishandiso ichi chinoda kuisirwa app nemadhiraivha here kana kuti ingori plug uye kutamba?
Mhinduro:Hapana chaanoda.Inoshanda zvakanaka mumasekonzi.
Zvakapfuura: 7in 1 USB3.0 Rudzi-C3.0 kuHDMI Type-C SD/TF Docking chiteshi cheSurface Pro 7
Zvinotevera: Type-C 15w isina waya HUB (12 mu1)